Uyavela enkantolo 'owashiya' usana etekisini | News24
Uyavela enkantolo 'owashiya' usana etekisini
Durban – Owesifazane owashiya ingane etekisini enxanxatheleni yezitolo iPavilion emasontweni amathathu edlule uzovela eNkantolo yeMantshi yasePinetown ngoLwesithathu.
Owesifazane uboshwe ngecala lokulaxaza ingane ngomhlaka 20 Disemba.
Phambilini iNews24 ibike ukuthi ingane yomfana yatholwa phansi kwesihlalo setekisi kukhona nencwajana eyayishiywe ngunina, exolisa ngokuyilaxaza.
OLUNYE UDABA: Kushone abazali kwasinda izingane engozini yomgwaqo
Incwadi yayithi: "Ngiyaxolisa ngesenzo sami, ngicela uxolo. Akukho engingakwenza. Ubaba wengane wayiphika. Anginawo umazisi wokufaka isicelo sokuthola isibonelelo sikahulumeni ngexa yokuthi ngawushiya emakhaya. Ngicela inakekelwe kahle ingane yami noma ithunyelwe emaphoyiseni.”
Okhulumela amaphoyisa uCaptain Nqobile Gwala uthe amaphoyisa ophiko lwe-Family Violence, Child Protection and Sexual Offences ePinetown abopha umsolwa oneminyaka engu-37 ubudala elokishini laseMbo, ngaseHillcrest.
46% - 5158 votes
54% - 6116 votes